Kongo: kedu ma ọ bụrụ na Brazzaville gbanwere aha ya? Na Eprel 23, 2014, Onye isi ala nke Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, na esemokwu ya na ụmụ nke onye nchoputa ahụ bụ Pierre Savorgnan de Brazza, ga-achọ iyi ịkpọghachi isi obodo Congo.
Site na: KongoLisolona: July 3, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Obodo Brazzaville, nke bụ "Isi" nke Charles de Gaulle nke Free France n'oge Agha Secondwa nke Abụọ, nwere ike ịkwụsị aha ya. Ebe ọha niile na-aza aha ...	GỤKWUO
La Sape: oke ma ọ bụ ejiji? Ọ bụ Papa Wemba bụ onye bụ ntọala nke ihe ndị a niile? Ha bụ sappers, acolytes nke otu afọ 25 dị afọ akpọrọ "La Sape", ya bụ, "Otu ndị ambiance na ndị mara mma (Aka Kitendi, okpukpe nke web)" Onye tụgharịrị gburugburu ụdị dị oke ọnụ, nke kachasị okomoko nke ụdị ejiji dị egwu n'ụwa
Site na: KongoLisolona: Mee 17, 2020 10: 25 Enweghị asịsa
Ndị egwuregwu Sape na-eyi jaketị maka $ 10 na akpụkpọ ụkwụ $ 000, mana ụmụ nwoke ndị a, ọkachasị ndị na-eto eto, ma ọ bụghị ndị Congo, ọ na-esiri ike inweta ego na…	GỤKWUO
RIP Frangin: "Enweghi akwa nke uwe eji akwa akwa na nke dị naanị ahụ" a nwere ọdịiche dị n'etiti kpakpando na kpakpando? Ọ bụrụ ee, ọ̀ pụtara na e nwere ọdịiche dị n'etiti ịme ọfụma na imekọ ahụ (imechi ahụ ma ọ bụ ịmakụ onye ọzọ)?
Site na: KongoLisolona: Mee 17, 2020 07: 07 Enweghị asịsa
Ezubere igwe ahụ maka nwoke na nwanyị. Mgbe ụfọdụ ndị isi ojii / ndị Africa, ọkachasị (ndị Congo na Ivorians na-eyi ha). Ha na-akasi onwe ha obi site na ikwu ...	GỤKWUO
Aug08 08: 16